Rasmi: Sevilla ayaa dib ula soo saxiixatay xidig Barcelona ah –
Home SUUQA IIBKA Rasmi: Sevilla ayaa dib ula soo saxiixatay xidig Barcelona ah
Rasmi: Sevilla ayaa dib ula soo saxiixatay xidig Barcelona ah
Sevilla ayaa ku dhawaaqday saxiixa Ivan Rakitic oo ay kala soo wareegtay kooxda Barcelona.
Intii lagu guda jiray waayihiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda Andalusian, khadka dhexe wuxuu saftay 149 kulan, wuxuu dhaliyay 32 gool, 41na wuu caawiyay, sidoo kale wuxuu kabtan u ahaa koobkii 2014 Europa League.
Rakitic wuxuu sameeyay dadaal dhaqaale oo aad u badan si uu dib ugu biiro kooxdiisii ​​hore – taasna waxay cadeyn dheeri ah u tahay jaceylka uu u qabo wax walba Sevilla inuusan waqtiga yareyn.
32 jirkaan ayaa hamigiisa wuxuu ahaa inuu ku laabto Seville maalin uun, halkaas oo uu kula kulmay xaaskiisa Raquel Mauri.
Talaabadan ayaa ka dambeysay xilli ciyaareed adag oo uu ku sugnaa Barcelona, ​​halkaasoo waqtigiisii ​​ciyaareed uu aad u saameeyay labada tababare ee Ernesto Valverde iyo Quique Setien.
Rakitic ayaa dood ka keenay fursado la’aanta ka heysata garoonka dhexdiisa, isagoo intaas ku daray inuu ka xun yahay iibintiisa xagaagii lasoo dhaafay.
Xagaagan, si kastaba ha ahaatee, wuxuu fahamsan yahay in kooxda reer Catalan ay dooneysay inay isaga dhaqaajiso isla markaana ay heshay wadadii saxda ahayd ee looga bixi lahaa – dib ugu laabashada Sevilla.
Imaatinka xiddiga reer Croatia ayaa dhiiri galin weyn u ah Julen Lopetegui, kaas oo horey uga keenay Real Madrid Oscar Rodriguez dariishankan.